imaginary clouds: ရုပ်ရှင် ( The Lovely Bones )
Susie Salmon ဆိုတဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကို သူ့ အိမ်နီးနားခြင်း လူတယောက်က သတ်လိုက်တယ် ။ Salmon က Heaven ဆိုတဲ့ နေရာကနေပြီး သူ့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း သူ့မိသားစု ရဲ့ နေစဉ်ဘဝ ဖြတ်သန်းပုံတွေကိုတွေ့နေရတယ် ၊ အထူးသဖြင့် သမီးဖြစ်သူကိုသတ်သွားတဲ့ တရားခံကို ဖော်ထုတ်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေတဲ့ဖခင် နဲ့ဆက်သွယ်ပုံ ( စိတ်ခြင်းဆက်သွယ်သလား ၊ ဝိဥာဏ်ခြင်း ဆက်သွားသလား ၊ ဘယ်လိုဆက်သွယ်သလဲဆိုတာကို သေချာမရေးပြတတ်ဘူး )တို့ကိုရိုက်ပြထားတာ ကြည့်လို့ကောင်းတယ် ။
ဒါရိုက်တာက Heaven ဆိုတဲ့နေရာကို သရုပ်ပေါ်အောင် ၊ ရိုက်ပြထားတာ တွေကမိုက်တယ် ။
Salmon ဖခင်မှာ သင်္ဘောသေးသေးလေးတွေကို ပုလင်းထဲထည့်တဲ့ ဝါသနာ ရှိတယ် ။ သူ့သမီးဆုံးပါးသွားတော့ အဲသည့်ပုလင်းတွေကို ရိုက်ခွဲပစ်တယ် ။ အဲသည့်အချိန်မှာ ပင်လယ်ထဲကနေပြီး သင်္ဘောလေးတွေပါတဲ့ပုလင်းလေးတွေ ကမ်းခြေကိုဆိုက်ရောက်လာပြီး ကမ်းခြေက ကျောက်ဆောင်တွေနဲ့တိုက်ပြီးကွဲသွားတာကို တလှည့်စီရိုက်ပြတယ် ။ အဲသလို ရိုက်ပြတဲ့ ပြကွက်တွေတော်တော်ပါတယ် ။
လူသတ်သမားကိုလည်း ကြောက်စရာကောင်းအောင်ရိုက်ပြတယ် ။ ကြောက်စရာပုံဖြစ်နေလို့ ဘလော့ပေါ်မတင်တော့ဘူး ။
ရယ်စရာအနေနဲ့ကတော့ Salmon ရဲ့ အဖွားက သူပထမဆုံး သူ့ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ် နမ်းတဲ့အကြောင်းကို Salmon ကိုပြောပြတယ် ။ Salmon ဆုံးသွားပြီးတော့ သူ့တို့မိသားစု စိတ်သက်သာအောင် ၊ Salmon အဖွား သူ့တို့ အိမ်မှာလာနေတယ် ။ အဖွားကသောက်လက်စ စီးကရက်ကို လက်ကြားအမြဲညပ်ထားတယ် ၊ အရက်သောက်တယ် ၊ မီးဖိုချောင်ထဲ ချက်လက်စ ဒယ်အိုးမီးလောင်ရင် အနီးအနားကရှိတဲ့ ပန်းအိုးထဲကရေနဲ့ငြိမ်းလိုက်တယ် ။ ပန်းတွေကိုမဖယ်ဘူး ။ မီးငြိမ်းသွားဖို့ကအဓိကမဟုတ်လား ၊ :)
Salmon မောင်လေးက သူ့အဖွားကို ခြေသည်းဆိုးပေးရင်း သူ့အဖွားကိုပြောတယ် ။ မှတ်မိသလိုပြန်ရေးရရင်
မောင်လေး ။ ။“Salmon မရှိတော့ဘူး”
အဖွား။ ။“Salmon Heaven ကို ရောက်သွားတာ။”
မောင်လေး။ ။“Heaven ဆိုတာမရှိဘူး ။”
အဖွား။ ။“Heaven ဆိုတာမရှိဘူး ဆိုရင် ၊ Salmon သေသွားတာ။”
မောင်လေး ။ ။“ Salmon မသေဘူး ။ အဖွားပဲသေမှာ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖွားက အသက်ကြီးနေပြီ”
ရုပ်ရှင်ကားအချိန်တော်တော်များက ကြည့်သူကိုဆွဲဆောင်ထားတယ် ။ အသည်းယားစရာဖြစ်အောင် ရိုက်ပြထားတယ် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော် အဲသည့်ကားကို ကြိုက်တယ် ။ နာမည်ကျော် Ghost ရုပ်ရှင်ကိုလည်း ပြန်လည် အမှတ်ရစေပါတယ် ။
Ref: The Lovely Bones
Posted by icn2 at 02:14
မြတ်ကြည် 27 October 2011 at 23:06
I am going to put it in the list to do for this weekend. Thanks for the review. :)
icn2 28 October 2011 at 19:31
မြတ်ကြည် 30 October 2011 at 23:19
i have shared the blog link on my blog :) btw, it doesn't show the updates.